Koboca Islaamiyiinta Soomaaliya - Q.9aad
Maxaa Fashiliyey Dhexdhexaadintii Xasan Al-Turabi Ee Siyaad Barre iyo Islaamiyiinta Soomaaliya?
Islaamiyiinta Soomaaliya waxaa inta badan lagu sheegaa kuwa aan bislayn oo hal la boodo leh isla markaana aan la jaanqaadi karin isbedelka siyaasadda waqtiyada qaarkood. Marka la barbardhigo wadama badan oo islaam ah. Sida Masar iyo Sudan.
Wadanka Sudan kolkii uu fashilmay Afgembi ay wadeen kooxo Shuuciyiin ah oo uu hogaaminayey Axmed Maxjuubi July 1971-dii ayaa Madaxweynihii wadankaas ee xilligaas Jacfar Al-Numayri waxaa uu wadankiisa ka eryey July 1971-dii khubaradii Midowgii Soofiyati ee Sudan joogatay, isagoo isla markaana hoos u dhigay xiriirkii uu la lahaa Soofiyatka tuhuna ka qabay inuu gacan siinayey isku daygaas Afgembiga. Halkaas waxaa ka faa’iidaystay Islaamiyiinta Suudaan oo markaas u muuqday Cadawga koowaad ee xukuumadaas uu madaxda ka ahaa Jacfar Al-Numayri.
Sanadkii 1977-kii ayaa waxaa heshiis dib u heshiisiineed dhexmaray laba kooxood Islaamiyiinta Sudan ahaa , waxaana Xasan Al-turaabi loo ogolaaday inuu dalka dib ugu soo noqodo, isagoo Sudan uga maqnaa Masaafuris iyo weliba xabsi lix sano uu ku jiray oo ka horayey Masaafuriskaas.
Turaabi waxaa la siiyey Jagada Wasiirka Cadaaladda Sanadkii 1979-kii isagoo ku dhex milmay nidaamkii uu madaxda ka ahaa Jacfar Al-Numayri, ugana faa’iidaystay inuu bulshada reer Sudan ku baraarujiyo ku dhaqanka shareecadda Islaamka.
Sudan ayaa ahayd wadan ay wax ku bartaan Soomaali badani iyadoo waxbarashadaasina ay saamayn ku yeelatay ardaydii wax baranaysay . Sudan codka Qalinjebinta ardayda Jaamacadaheedu waa 26 cod sanadihii sideetamaadkii. Waxaa 25 ka mid ah codadkaas ku guulaysta ardayda u janjeerta afkaarta Islaamiyiinta taasoo Sudan ka dhigaysa meel ay aqoonteeda hogaamiyaan Islaamiyiintu. Waxaay lagama maarmaan in Soomaalida wax ku soo baratayna ay sidaas oo kale noqdaan.
Aqoon-yahan Cabdicasiis Faarax ayaa ka mid ahaa raga wax ku soo bartay Sudan. Kan tirsanaa Ururka Al-itixaad. Bartamihii Sideetamaadkii ayaa Cabdicasiis Faarax waxaa uu tegey Sacuudiga sida uu ii sheegay Aqoonyahan A.A oo ka mid ah aqoonyahanadda Islaamiyiinta.Xilligaas ku sugnaa Sacuudiga waxaa jirty warqad qoraal ah oo uu Xasan Al-Turaabi u soo dhiibay Cabdicasiis Faarax, uguna soo dhiibay Islaamiyiinta Soomaalida oo madaxdoodu inta badan ku sugnayd Sacuudiga waxaana uu xoog warankiisii iigu bilaabay sidan:-
’’ Anigu waxaan waqtigaas ka mid ahaa ardaydii wax ka baranaysay Sacuudiga,aad ayaan ugu dhodhowaa xarakadda Islaamiyiinta. Waan ka war hayey Allaha u Naxariiste Cabdicasiis Faarax inuu xarakadda u soo gudbiyey dhanbaalkii Xasan Al-Turabi odayadii madxada u ahaa xarakadda Islaamka. Nuxurka dhanbaalka ayaa ahaa in uu dhexdhexaadiyo Madaxweynihii Hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre iyo Islaamiyiinta oo ragga inta badan hogaamiyaa ay joogeen Wadanka Sacuudiga . Waxaa Turaabi qorshihiisaa dhexdhexaadineed ku soo bandhigay inuu isagu la hadlayo Maxamed Siyaad Barre, kana dhamaynayo wax dhinaciisa ku xiran. Waxaa uu ku booriyey Islaamiyiinta Soomaaliya in iyaga reer Sudan ahi la heshiiyeen Jacfar Al-Numayri. Intaad dibadda ka ahaan lahaydeen dawladda waxaa ka haboon ayuu u sheegay inaad la heshiisaan oo dhexgashaan. Waxaa uu soo bandhigay in Bangi Islaami ah oo Sacuudigu maalgelinayo laga furayo Muqdisho.Siyaad Barre waa ogol yahay ayaa qoraalkaas ku qorayd.’’
Markaas ayaan waxaan weydiiyey maxaa fashiliyey isku daygaas? Waxaa uu iigu jawaabay:
’’ Waxaan oran karaa bisayl la’aanta waqtigaas Islaamiyiinta iyo Islaamiyiinta u badnaa reer Waqooyiga oo ku adkaystay inaan wax wada hadal ah lala gelin Siyaad Barre. Waxaa kaloo laga baqay in Islaamiyiinta Soomaaliya kala qaybsamaan hadii qolo isku daydo in wada hadal lala furo Xukuumadii Kacaanka ahayd. Laakiin Turaabi aad ayuu marar kale isugu hawlay inuu wada hadalsiiyo Siyaad Barre iyo Islaamiyiinta. Mar dambe ayaan garanay waxaa uu Turaabi u doonayey inaan la heshiino Siyaad Barre ………’’
Kolkaas ayaan ku celiyey maxaad garateen oo aaydinaan markii hore garan?
’’ Waxaan garanay taladii Turaabi hadaan raaci lahayn in wax badan noo qabsoomi lahaayeen. Laakiin wax walbi waa qadar alla.’’
Akhri... Qaybta 10aad....